'Iyigugu kimi inyanga yabesifazane' | isiZulu
'Iyigugu kimi inyanga yabesifazane'
IZITHOMBE: USuku lwabesiFazane
Balindele ngabomvu uZuma
USbo da Poet ubaphoxe kabi abahleli bomcimbi
Durban - UNomusa Sibongile Nsele, 60, onguthishanhloko wasesikoleni samabanga aphansi iZamokuhle, esiKwaMashu esigcemeni sakwa-D, uthi inyanga yabesiFazane iyigugu kuye futhi uyigubha minyaka yonke.
UMaNsele owazalelwa endaweni yakwaNganase waqala imfundo yakhe kuyo le ndawo wase wayoqhubeka nemfundo yakhe eThekwini, KwaMashu ngo-1967. Waze waqeda umatikuletsheni wakhe khona kuleli lokishi kanti unezingane ezine - abafana ababili namantombazane amabili futhi uzikhulisa yedwa.
Lo thishanhloko uthi abantu besifazane sebeyakujabulela ukuthi kunenyanga ebekelwe ukubungaza bona ngoba likhona iqhaza abalibambayo empilweni.
OLUNYE UDABA:IZITHOMBE: Izintombi zaseMhlangeni
Uthi impilo yomuntu wesifazane imatasatsa kakhulu ngoba uma usufike ekhaya njengoba engumama okhulisa izingane ezine yedwa kufanele abuye abengubaba ezinganeni zakhe, kube sengathi ukhona ubaba wekhaya futhi akwazi nokuthwala izinselelo zakhona.
"Kulezi zinselelo engibhekana nazo angibonisani namuntu, angifani nomuntu onophathina (umyeni noma isoka) kodwa ngokuthembela eNkosini nokukhuleka ngibona kuhambeka kule ndlela.
"Okunye futhi ngisuke ngivela emsebenzini nawo onezinselela zawo, uma uwumphathi konke kusemahlombe akho ngoba ulawula yonke into kusukela kwisakhiwo saleyo ndawo, abantwana osebenza ngabo, othisha osebenzisana nabo, abazali nomphakathi wonkana, konke kusuke kubheke mina ngesikhathi esincane.
"Kangangoba kwesinye isikhathi uyaphuma kosuke ukuhlelile ukuze uzokwazi ukunika lezi zinto indawo.
"Umama uhlezi ewumama noma yikuphi ngoba abantwana bala esikoleni ngibathathisa okwabantwana bami futhi umsebenzi wethu njengothisha uwukukhulisa umntwana. Umkhulise ngazo zonke izindlela hhayi ukuthi ugcine ngokumkhulisa ngemfundo kodwa mina njengothisha umsebenzi wami ukuqhubeka nendima edlalwa wumzali. Kunjalo nje ingane ichitha isikhathi esiningi nothisha kunomzali ngoba umzali ubuya emsebenzi ekhathele, usekha phezulu ngoba akanaso isikhathi, nomntwana akasakwazi ukukhuluma nomzali ngoba ekhathele. Kanti mina la esikoleni, kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukubona ukuthi engathi lo mntwana unenkinga, ngimsondeze, ngimbuze ngize ngigcine sengishayele nocingo abazali ngizwe ukuthi alukho ushintsho abalubonayo enganeni.
"Okwasemsebenzini ngikushiya emsebenzini kanti nokwasekhaya ngikushiya ekhaya ngoba manje kuzoshayisana uma ngifika emsebenzini nezinkinga zasekhaya, ngeke kulunge."
UMaNsele uthi izinselelo abhekana nazo empilweni njengomuntu wesifazane wukuthi uyadeleleka uma ungenaye umyeni, labo abanabo abakwethembi kubayeni babo noma ngabe isimilo sakho sisihle uzazi.
"Ngiyacabanga ukuthi ukungabi naye umyeni kusuke kuwuwe ozikhethele, usuke usuvumile ukuthi impilo iyaqhubeka noma ngabe akekho umyeni eduze kwakho futhi kubalula kakhulu uma ngizithathela zonke izinqumo, ngingancikile komunye umuntu. Uma into nginayo nginayo uma ingekho kufanele ngizizamele, angiphazamisi muntu ezinhlelweni zakhe. Futhi ngenelisekile ngempilo engiyiphilayo ngingedwa nabantwana bami."
UMaNsele ebuzwa ngokukhululeka nokuphepha ezweni ewumuntu wesifazane futhi ophethe esikoleni uthe akaziboni ephephile ngoba kuningi akubona kumabonakude nakulalela emsakazweni okungekuhle.
"Kungekudala nje kuke kwaba nesehlakalo sokwebiwa noma ukuthunjwa kwezingane zesikole, sangena nathi singiothisha futhi siphatheke kabuhlungu ngoba ingane ekugcineni kufanele ngiphendule ngoba ingane iphume ekhaya iza esikoleni.
"Ngisho nasemakhaya asiphephile ngoba uma izigebengu zisingenela emakhaya ziqala kubantu besifazane ngoba siyaziwa ukuthi asinawo amandla futhi asikwazi ukuzivikela."
Lo thishanhloko uthe uSuku lwabesiFazane ulugubhe nabanye omama basenkonzweni akhonza kuyo iChurch of God of Profecy. Ngalolu suku njalo bayahamba bayolugubha kwelinye lamagatsha ebandla.
Kulokhu bebekwigatsha iMangethe behlangene bengabantu besifazane lapho abebelulekwa khona ngempilo bephinde bekhulisana bengabantu besifazane.